Naa Ninka Qarxi Sheeko Taxane AH Q1aad - Daryeel Magazine
Naa Ninka Qarxi Sheeko Taxane AH Q1aad
”Haa qarxi oo maalin taajir sida walaashaa Deeqa. Naa horta walaashaa Deeqa inta lagu meheriyay ma taqaan? Waxaa lagu meheriyay $ 25000, waxaas oo dhan waxaa ka daran gabadha Saynab ee eedadaa dhashay waxaa lagu meheriyay lacag iyo dahab aanan tiradooda xasuusnayn. Adiguna maantaad fursadii oo kale haysataaye ka faa’iidayso baan ku idhi oo ninka qarxi waxaad tahayna tus, haa qiimahaaga tus!”
Hodan iyadoo indhaha taagtaagasa bay hooyadeed waydiisay: “ hooyo qiimahayga ma wuxuu ku xidhanyahay qiimaha meherkayga?”
“ haa, dee maxaad ogtahay doqon baa tahaye. Naa naagba naagtay ka meher badantahay ka qiiimo badan oo ….” Iyadoo hadalkii wadaa albaabka la soo qaraacay oo hadalkii baa ka istaagay. Hodan dhankii albaabka bay aaday oo waxay ka furtay saaxiibteed Farduus. Farduus baa soo gashay oo iyadoo yara dhoolacadaynasa ku tidhi Hodan “ ala hadii lagu arooso ama aroos iska daaye lagu meheriyo waxaan ka baqayaa inaad na ilawdo, waayo hada maalintii lagusoo doonay baa noogu kaa dambaysay” . Hodan iyo Farduus qosol dheer baa la isku daray oo qolkii Hodan la galay si ay u sheekaystaan cabaar. “farduuseey waan yaabanahay oo hada islaamahaan qaraabadana nahay iyo kuwaan isnaqaanoba waxay igu cadaadinayaan inaan meherkayga aad qaali uga dhigo oo miskiina Cumar dhibo”
Farduus baa la soo booday “ ala naa waanba ilaawaye maanta inaan meherkaagu intaa ka dhigasid soo ogaado baan kuugu imi oo sheekaa shalay nala gashay anagoo badan” Hodan oo yaaban baa si dag dag ah u tidhi “Maxay sheeko idin la gashay ma meherkayga?”
“ naa may meherkaaga maaha , laakiin waxaa la yidhi gabadha meherkeedu qaaliga yahay lama furo oo ninku hadii arooska qarash badan ka galo gurigiisa si ciyaar ciyaar ah kuma dumiyo markaa…” Hodan baa ka soo dhex gashay “ oo ma waxaad leedahay meher badan baa furniinka baajiya” “ may anigu waxaas kuma raacsani oo shalay markaan ka doodanay arinkaas qolada kasoo hor jeedaan ahaa. Markaa sheekadii baan kuu wadaye tii Rooda iyo Muuna waxay dhaheen si aan naloosoo furin meherkayaga aad baan u qaaliyaynanaa oo wax kale kuma garatide ninka waan qarxinanaa” Farduus iyo Hodan baa qosol dheer isku daray oo Hodan hooyadeed ku soo baxday.
“Naa maxaad la qaylinasaan miyaydaan naago waawayn oo xishoonaya ahayn” baa Hodan hooyadeed tidhi.
Hodan oo wali sii qoslasa baa qolka kasoo baxday oo tidhi “ ala hooyo maanu qaylinayne wax qosol ah baanu ka sheekaynanay markaas baan is ilawnayba”
Farduus baa iyana ku dartay “ eedo waxaa la yidhi meherka hala qaaliyeeyo si furniinka looga hor tago” ka dibna Hodan iyo Farduus baa qosol isku daray.
W/Q: Layla Axmed (Istaahil)
Calaamadaha Ninka Wax Jecel Astaamaha Lagu Garto Ninka Wanaagsan Ee Mustaqbal Doonka Ah Xikmado Dahabi Ah Faa’iidada Qarsoon Ee Ay Raggu Ka Helaan Qabashada Howsha Guriga